२०७७ मङ्सिर २३ मंगलबार ०१:४२:००
मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गराउँदा दबाब कत्तिको झेल्नुपर्‍यो ?
त्यतिवेला त चर्कै दबाब थियो । अदालतले गरेको फैसला हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ । दबाब आए पनि हामीले खुलाउन सक्ने कुरा भएन । सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा आउने भए । तर, मापदण्ड नपुर्‍याई कसैलाई पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय हामीले गर्‍यौँ । विधिको शासन परिपालना गराउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ ।
दबाब र धम्कीहरू आए नि ! त्यस्ता धम्की आइरहन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्ता कुरा देखेँ । तर, मेरो कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन । व्यवसाय गर्नु छ भने सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार चलाऔँ भन्ने मात्रै हो ।